Faka iQela lokuBona ku-Ubuntu 18.04 kwaye ulawule kude inkqubo yakho | Ubunlog
Kulabo abangayazi iQelaViewer, ndiza kukuxelela ukuba le isoftware yabucala yesoftware esivumela ukuba sinxibelelane ngokude kwezinye iikhompyuter, iipilisi okanye ii-mobiles. Imisebenzi yayo ephambili ibandakanya: ukwabiwa kude kwedesktop kunye nolawulo, iintlanganiso ezikwi-Intanethi, inkomfa yevidiyo, kunye nokudluliselwa kwefayile phakathi kweekhompyuter.
Oku kuyenza ibe lukhetho olukhulu kwiinkampani, amashishini, iiofisi, kunye nokunye. Inenguqulo yayo yasimahla kunye nehlawulelweyo, apho isimahla silinganiselwe ekusebenziseni komntu kwaye ahlawulelwayo egxile kwiinkampani.
Kwinguqulelo edlulileyo yoBuntu, Ukucaciswa kwe-17.10, ukusetyenziswa kwe Iqela leViewer lilinganiselwe ngumncedisi womzobo yoku, kuba wonke umntu uyazi ku-Ubuntu 17.10 isigqibo besenziwe ukuba sibekwe Wayland njengeseva ephambili, nangona iXorg yayiqukiwe njengasesekondari kwaye iyafumaneka.
Le yayiyingxaki esondeleyo yokusebenzisa iQela eliBonayo kuba ukusetyenziswa kweeseshoni ezikude eWayland kulinganiselwe kakhulu njengokulawula kude okukude kunye nokuhanjiswa kwefayile okungenayo kuxhaswa.
Ke ukuba ufuna imowudi ye-bidirectional kuye kwafuneka usebenze kwiXorg, ukongeza kwinto yokuba okwangoku kukho inkxaso ye-Gnome eWayland, le yenye ingxaki ukusukela oko iQelaViewer kwafuneka lenze kwaye lixhase ingxelo kwimo nganye yedesika. .
Olo tshintsho sele lukhona ku-Ubuntu 18.04 kuba sinoXorg kwakhona Njengowona mncedisi uphambili, ukongeza kwinto yokuba iQelaViewer lihlala lihlaziywa ngalo mzuzu, likwinguqulelo yayo engu-13.1.3026.
1 Yintoni entsha kwiQelaViewer 13.1.3026.
1.1 Ukulawula i-remoto
2 Uyifaka njani iQelaViewer kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo?
3 Uyisebenzisa kanjani iQela lokuBona ku-Ubuntu?
Yintoni entsha kwiQelaViewer 13.1.3026.
Njengakuyo nayiphi na inguqulelo entsha, ikhowudi iphuculwe ngokusekwe kuhlobo lwangaphambili ukusombulula ezinye iingxaki kunye nokungahambelani.
Phakathi kwamagqabantshintshi ale nguqulo kukuba kunxibelelwano lwezixhobo umphathi ngoku wazisa umsebenzisi malunga nokusikelwa umda konxibelelwano kwimeko yokusebenza kwiWayland.
Kwakhona yazisa umsebenzisi xa iqala ukusebenza ngasemva kwaye akukho icon yetreyi ikhona.
Ngaphandle koko kule nguqulo ekugqibeleni ingxelo epheleleyo yomthengi iyafumaneka, Kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo, ukudityaniswa kwendalo komthengi kunye neenguqu ezingama-64-bit kwenziwa.
Ibar yesixhobo inembonakalo entsha, ngoku ungasitshintsha isisombululo esikude kwaye uqalise ukuhambisa ifayile ngaphakathi kweseshoni elawula kude.
Uyifaka njani iQelaViewer kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo?
Ukufakela esi sixhobo sikhulu kwinkqubo yethu kufuneka ukuya kwiwebhusayithi esemthethweni yeprojekthi nakwicandelo lokukhuphela Singafumana iphakheji yetyala leenkqubo ezingama-32 kunye nama-64.
Nangona isebe eliphambili le-Ubuntu layeka inkxaso engama-32-bit, izinto ezingasukiyo ezinje ngeKubuntu kunye neXubuntu zisakhupha iinguqu ezingama-32 kule nguqulelo intsha ye-18.04 LTS.
Yenziwe ukhuphelo Singafaka iphakheji kunye nomphathi wephakheji esithandayo okanye nakwisiphelo.
Yiyo kuphela kufuneka sivule ikhonsoli, zibeka kwifolda apho sigcina ipakethe ekhutshelweyo kwaye usebenzise lo myalelo ulandelayo:
Nje ukuba ukufakelwa kwenziwe, kunokusicela ukuba siqwalasele ukuxhomekeka ekuphunyezweni ngokuchanekileyo kweQela eliBonwayo kwikhompyuter yethu koku esikwenza kuphela kwisiphelo sendlela:
Kwaye ngaloo nto siza kuba nesicelo esifakwe kwinkqubo yethu.
Uyisebenzisa kanjani iQela lokuBona ku-Ubuntu?
Ukuba eli lixesha lokuqala usebenzisa esi sicelo, emva kokwenza ufakelo kufuneka usebenze umxhasi weQela lokuBona kwinkqubo yakho nakwiikhompyuter eziza kuqhagamshela.
Ngoku Ukuqhagamshela kwenye ikhomputha umthengi ukunika icandelo lokubeka i-ID yezixhobo apho uza kudibanisa khona kwaye iya kukucela iphasiwedi ekufuneka ikunikeze, ngendlela efanayo ikunika i-ID kunye negama lokugqitha oya kuyisebenzisa ukuqhagamshela kude kwi khomputha yakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » Faka i-TeamViewer kwi-Ubuntu 18.04 kwaye ulawule kude inkqubo yakho
UMario Chacon sitsho
Inkcazo egqwesileyo, igalelo elifanelekileyo
Phendula uMario Chacon